Onye isi ala bụ Aktaş Kahraman nyere Nuri Acar ọkwọ ụgbọ ala | RayHaber
[29 / 11 / 2019] Onye isi njikwa BT TCDD zutere Uygun n'ọfịs ya	06 Ankara
[29 / 11 / 2019] Ankara İzmir YHT 2022 Afọ Emechara	06 Ankara
[29 / 11 / 2019] Kedu mgbe Karaman Konya High Speed ​​Line Open?	42 Konya
[29 / 11 / 2019] Gbadoro anya na ESO na EOSB Rail Systems	26 Eskisehir
[29 / 11 / 2019] Hospitallọ ọgwụ Buyukakin Kocaeli City na-achọ akụ maka Project Tram	41 Kocaeli
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaOnye isi ala bụ Aktaş Kahraman nyere Nuri Acar ọkwọ ụgbọala ahụ
09 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Mpaghara Marmara, Turkey 0
Onye isi ala Aktas Hero nyere Soforu
Onye isi ala Aktaş Kahraman nyere onye ọkwọ ụgbọala ahụ; Onye isi obodo Bursa Metropolitan Alinur Aktas, ka ụgbọ ala nọ na-agba ndị njem niile nọ n'ụdị oyi iji gbapụ n'enweghị nsogbu, ọdachi nwere ike ibute onye ọkwọ ụgbọ ala Nuri Acar'a wristwatch onyinye.
N'ime ihe ahụ mere na Wenezde gara aga na mkparịta ụka nke Gökdere, ihe dị ka ndị njem 20 na 'Sculpture' n'ụzọ Nuri Acar (37) na-eji bọmbụ efere 16 BOD 49, ọkụ malitere n'ihi ụzụ ọrụ. Acar mepere ụzọ nke bọs ahụ site n’ịghọta ọkụ, ndị njem nwere ọbara oyi site na nbudata, gafere n’ihu ọdachi. Engersgbọ ndị njem nwuru ọkụ dị egwu, ndị na-agbanyụ ọkụ gburu ya site na ọkwa ahụ. Onye isi obodo Obodo Alinur Aktas, ekele maka nlebara anya na ịdị jụụ nke ihe omume ahụ, ọbụlagodi imi onye ọ bụla nwụrụ na bọs Nuri Acar'ı bọs bọs nwere nnukwu ụlọ obodo.
Ka anyị were ndị ọrụ afọ ofufo ahụ
N’ikwu okwu n’oge nleta onye isi Burulaş General Manager Mehmet Kürşat Çapar bịara, Onye isi ala Aktaş kwuru na agbanyeghị na ihe ahụ mere bụ nnukwu okwu, a napụrụ ndị njem niile na mgbali pụrụ iche nke onye ọkwọ ụgbọ ala Nuri Acar na ọ na-enye afọ ojuju na onweghị onye ga-agbafu imi site na imi. Maazị Aktaş kwuru na ha wetara ndị mmadụ ọrụ ha n'ụtụtụ nakwa n'ụlọ ha, ndị di na nwunye, ụmụaka na ndị ha hụrụ n'anya na mgbede Arasında Enwere ike ụfọdụ adịghị ike na ezughị oke na sistemụ ebe usoro ụgbọ okporo ígwè, bọs na bọs ọha ndị nkịtị dị nso otu nde mmadụ dabere na ntọala ndị a. Mana maka mbọ ndị enyi anyị pụrụ iche, anyị hụrụ na emechirila mmechi ahụ. Ọ ga-amasị m ikele onye ọrụ ibe anyị Nuri Acar na onye isi anyị niile akpọrọ ihe. Ana m ekwupute otu ọzọ na anyị na-atụ anya otu ụdị uche na nnabata site na ndị enyi anyị niile. Ka anyị were obi ndị obodo anyị karịsịa n'ihe anyị na-arịọ, ihu anyị na-achị ọchị, na njikwa ọrụ anyị na ụkpụrụ anyị na-enye. ”
Dọkịnta ọkwọ ụgbọ ala Nuri Acar kwuru na ya na-anwa ike ya niile n'oge ihe omume a nakwa na ọ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ otu uche ahụ ma nke ahụ mechara.
Onye-isi Aktaar, Acar na ngwụsị nke nleta ahụ, nyere elekere mgbagha.
Erdal Acar, onye nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ oloko na Adana…
President Şahin nyeghachiri ụmụ akwụkwọ mbụ na ụlọ akwụkwọ
Onyinye dike nke dike nke Onye Ọchịchị Captain
Kahraman Driver kụziri onye njem ya na Ụlọ Ọgwụ dị na Sivas
A na-enye Gold Hero Driver Awarded with Gold
Pọọga na Hero Driver si Büyükakın
Nleba Anya Akparama agwa
Akwụ ụgwọ ego site n'aka Onyeisi na onye ọkwọ ụgbọala
President Aktaş gere ntị na nsogbu ndị dị na ụzọ ụgbọ oloko
Onye isi oche Aktas, T2 na-akọwa ọrụ ahụ
Kartepe agbanweela Sistem Kocaeli Card
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 29 November 1919 Foreign Affairs nke Britain
Njem njem 100 kwa ụbọchị site na Istanbul ruo na Ebe Awụrụ Anwụ na Istanbul Hilton Istanbul Bosphorus